Ileta Gris n'oge oyi | Njem zuru oke
Ezigbo Gris | | Greece
Greece Ọ mara mma inye ndị njem nleta na oge niile n'afọ. Mana n'oge oyi ị nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ n'ime ha karịa, n'ihi na enwere ndị njem nleta pere mpe ma enwere ike ịnabata ha nke ọma, ọ bụkwa oge nke afọ mgbe ọnụego dị ọnụ ala (obere oge).
Iji na-enwe skai Greece nwere ọtụtụ ezigbo ugwu na ya pụrụ iche ntụrụndụ, A na-ekwu na ọ nwere ugwu kachasị mma n'ụwa iji skai. Ihu igwe na oge oyi dị obere, ọ naghị ajụ oyi, nke ahụ na-enyere aka ịme ihe dị iche iche.
Gbọ njem n'oge oyi na-agabiga nnukwu oge, ebe ọ bụ na ụgbọ mmiri ole na ole na-akwọ ụgbọ mmiri, ọ ga-ekwe omume ịga njem nke ọma ma nwee ọmarịcha ihe okike na nke artificial. Gbọ mmiri na-agba agba gburugburu afọ niile site na ala ruo agwaetiti, mgbe ihu igwe dị njọ, njem ahụ na-esitụ ike, mana na ihu igwe ọ mara ezigbo mma ma na-atọ ụtọ.
Mkpọmkpọ ebe, ebe obibi ndị mọnk, wdg. enwere ike ịnụ ụtọ ha karịa, n'ihi na ebe ọ bụ na ndị njem nleta pere mpe, enwere ike itinyekwu oge na njem ahụ ebe ọ bụ na enweghị oke okpomọkụ, ihe niile na-adị mfe. Enwere ike ịsị na oge oyi bụ mgbe enwere ike ịme njem ọdịnala zuru oke.
Nleta ndị ọzọ enwere ike ime bụ ụlọ ọrụ na-azụ anụ ụlọ, ebe ha onwe ha nwere ike itinye aka na ọrụ ime obodo. A na-amalite ịghọ mkpụrụ oliv na njedebe nke afọ na njem nleta nwere ike isonye na owuwe ihe ubi na-eche akụkụ nke Greek omenala.
Atens bụ otu n'ime ebe ndị njem nleta na-agakarị n'oge oyi. Na ụbọchị ọdịnala nke njedebe na mmalite nke afọ ị nwere ike ịmara ma detụ nri Greek ọdịnala na ndụ abalị dị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ileta Gris n'oge oyi
Ihe ị ga-eme na Amsterdam n'oge oyi